Garbage Bin Factory - China Garbage Bin Manufacturers, abahlinzeki
Ukudonsa Udoti Bin-B001-B004 / B001A-B004A
Umgqomo kadoti ogingqikayo ungaba njengamathini kadoti wokuhweba. La makani alungele imicimbi yezimboni nemikhulu, imvamisa le ndawo izoba nenani elikhulu lodoti, izingcezu ezinkulu zikadoti. Ezindaweni zomphakathi ezinjengezikole noma izinkundla zemidlalo nazo zidinga ukuqoqa inani elikhulu lamaphepha, amabhodlela, noma amathini, umgqomo wokulahla udoti kukhethwe kahle.
13L / 23L / 42L isikwele plastic dustbin-B035 / B034 / B033
Okubandakanya ukwakheka okuphansi, i-gray rectangular wastebasket / trash can is great for office and front-of-the-house at restaurants. Idizayini ekhangayo yalomgqomo kadoti ihambisana nombala nobukhulu obuhlukahlukene obuhlukahlukene. Kuyisengezo esihle esiteshini sakho sokusingatha / sokusingatha izivakashi, noma sisebenzise ngemuva kwekhawunta esitolo sakho esincane esikahle ukuze abasebenzi bakho bakwazi ukulahla ngokushesha noma iziphi izigaxa zephepha ezingafuneki, noma zenzelwe ukusetshenziswa kwedeski.
I-23L / 42L isikebhe sepulasitiki esine-cover-B031 B032
Iziqukathi zasedeskini zonga isikhala, ziyonga, futhi zilula futhi ziyisixazululo semfucumfucu yedeski kanye nesisombululo esenziwe kabusha.
23L / 42L / 58L Quadrate Ukuhlangana Bin –B-013 / B-014 / B-015
Lena yitoti kadoti ongaxhumani nayo enhle enesembozo, ingamboza udoti ongcolile, futhi ujingi uzokuvimbela ukuthi uthinte umgqomo kadoti.
58L Ukuvula Ikhava Ukuqoqa Bin-B016D / B016E
Konke ukwakhiwa kwepulasitiki ngeke ku-chip, ukugqwala noma isifaca. Izinsimbi ezigoqiwe zengeza amandla, futhi kulula ukuzihlanza.
Ukuqoqwa Kwamaphepha We-58L I-Bin-B-016A / B-016B / B-016C
Imvamisa yonke indawo izobutha izikhwama ezincane noma ezinkulu zikadoti, zidinga ukuhanjiswa ziye esiteshini sikadoti, kepha ziningi kakhulu futhi zisinda kakhulu, khona-ke sidinga iloli elitshekile. Idizayini yeloli elitsheke endaweni yonke ukuxazulula inkinga kadoti osindayo nosindayo ukuze kuhanjiswe imfucuza enkulu, esindayo endaweni yabo yokugcina yokulahla.
660L Outdoor Udoti Inqola-B109
Idizayini ye-Ergonomic ekhulisa ukusebenza kahle komsebenzi futhi inciphise ubunzima.